Cosmopack 2019-news-HC Baako Aasiya
Waqtiga: 2021-04-13 Hits: 15
Hogaamiye ahaan warshadaha baakadaha, waxaan mas'uuliyad naga saareynaa yareynta raadkeena kaarboonka si gacan looga geysto la dagaalanka mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn jiilkeena-isbedelka cimilada. Hadafyadeena istiraatiijiyadeed waxaa ka mid ah in 1% la yareeyo xaddiga Jirka 2 iyo Baaxadda 2 CO20e.
Koox khibrad u leh naqshadeynta dhismaha si ay u hoggaamiyaan isbeddellada ganacsiga baakadaha oo ay la socdaan kumanaan kiis oo naqshad naqshadeysan ah.
Hawlahayaga oo dhan, iyo dhammaan silsiladdeenna sahayda ah, waxaan sii wadaynaa inaan ku tallaabsanno horumar ballaaran oo aan ku yareyno raadkeenna deegaanka. Istaraatiijiyaddeennu waxay ku dhisan tahay horumarkaas, dejinta xitaa heerar sare oo lagu yareynayo qiiqa gaaska lagu sii daayo, yareynta qashinka iyo isticmaalka biyaha, iyo soo saarista alaabtayada sida ugu anshaxa iyo mas'uuliyadda ugu macquulsan.
Qalabka loo yaqaan 'HC Packaging' wuxuu ku faanaa dhaqankiisa adeeg iyo sida ay nooga go'an tahay inaan hubinno firfircoonaanta bulshada ee aan ku nool nahay oo aan ka shaqeyno iyo macaamiishayada, iyo halka alaabadayada lagu sameeyo. Waxaan ugu adeegnaa jaaliyadahaas barnaamijyo awood-siineed, tabarucaad maaliyadeed iyo wax soo saar, iyo tabaruce, si aan saameyn togan ugu yeelano bulshada.
Sannadkii 2020, mutadawiciinta wax soo uruurinta ee xirmooyinka 'HC Packaging' waxay ku darsadeen in ka badan 1,000 saacadood sababaha maxalliga ah, laga bilaabo bixinta cuntada odayaasha, taageerada dhaqaale ee laba gabdhood oo iskuuley ah oo ku yaal Hunan, Shiinaha, xirxirida iyo ku deeqa buugaagta ardayda u baahan, iyo kuwo kaloo badan.
Ka soo horjeedka khad-dhaqameedka saliida-saliidda, soyka ku saleysan soy-ka waxaa loo maleynayaa inuu yahay mid deegaanka u roon, waxaa laga yaabaa inuu bixiyo midabbo sax ah, wuxuuna fududeynayaa dib-u-warshadaynta.
Hore: ProSweets Cologne 2019
Xuquuqda daabacaadda © 2021 - 2026 Xidhmada HC.
Kudar: O 9B, Lo Cn15, Duong So 4 Kcn Song Than 3 P Phu Tan, TP Thu Dau Mot Tinh Binh Duong, Vietnam